Sida loo rakibo loona qaabeeyo XAMPP GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Nexcoyotl | | Aplicaciones, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Kani waa hage casriyeyn ah oo ku saabsan sida loo rakibo loona qaabeeyo XAMPP GNU / Linux, oo leh tallaabo tallaabo tifaftiran.
1 Waa maxay XAMPP?
2 Sidee loo rakibaa loona habeeyaa XAMPP?
2.1 Ku rakibida Xampp
2.2 Dejinta XAMPP
Waa maxay XAMPP?
XAMPP waa gebi ahaanba bilaash ah oo fudud si loo rakibo qaybinta Apache oo ay ku jiraan MariaDB, PHP, iyo Perl. XAMPP xirmada rakibaadda waxaa loogu talagalay inay si fudud oo fudud loo rakibo oo loo isticmaalo .Gabi ahaanba bilaash ah oo fudud si loo rakibo qaybinta Apache oo ay ku jiraan MariaDB, PHP, iyo Perl.
Sidee loo rakibaa loona habeeyaa XAMPP?
Ku rakibida Xampp
1.- Kala soo bax XAMPP Linux https://www.apachefriends.org/es/index.html
2.- Dhamaadka soo dejinta waxaan leenahay a keydbaxsad, oo ay tahay inaan ku rakibno habka soo socda:
Waxaan ku fureynaa Terminal Xakamaynta + T, ama ka soo qaad liiskayaga.
Waxaan u galnaa sidii xidid:
Waxaan sii wadaynaa inaanu siinno rukhsad dil .run iyo inaan ku rakibno XAMPP
Waan aqbalnaa wax walbana waxaan sugeynaa inta rakibistu dhamaanayso.
3. - Waxaan u gudbeynaa qaabeynta XAMPP
Qalabka MySQL (MariaDB)
$ ln -s / opt / lampp / bin / mysql / usr / bin / $ mysql $ nooca mysql $ ls -lart / usr / bin / mysql
Dejinta xeerka com.ubuntu.pkexec.xampp.policy qaybta garaafka ah ee la socota rukhsadaha maamulka waxay soo saari doontaa feyl bash ah oo socda xampp-linux-x64-5.6.28-0-installer.run. Tan awgeed waxaan aadeynaa wadada / usr / share / polkit-1 / ficilada waana fulinaa:
$ taabashada com.ubuntu.pkexec.xampp.policy $ nano com.ubuntu.pkexec.xampp.policy
Gudaha feylka com.ubuntu.pkexec.xampp.policy waxaan dhajinaa nambarka soo socda:
Xaqiijinta ayaa loo baahan yahay si loo wado XAMP Control Panel xampp auth_admin auth_admin auth_admin /opt/lampp/manager-linux-x1.0.run run
Abuuritaanka qoraalka mas'uulka ka ah fulinta guddiga garaafka ee 'XAMPP' ee dariiqa / usr / bin / . Waa inaan abuurnaa qoraalka oo magac leh xampp-kantarool-guddi:
taabo xampp-control-panel nano xampp-control-panel
Dejinta a .desktop si loo bilaabo maareeyaha adeegga garaafka ee XAMPP, ku socod amarada soo socda, wadada / usr / share / applications:
Kadib markaad isticmaasho nano application.desktop gali nambarka soo socda
[Gelitaanka Desktop] Faallo = Bilow / Jooji XAMPP Magaca = XAMPP Xakamaynta Gudiga Exec = xampp-control-panel Icon = xampp Encoding = UTF-8 Terminal = Nooc been ah = Codsi
Hadda waxaan haynaa astaan ​​markii la riixo fulin doonta pkexec, taas oo na weydiineysa galitaan si loogu qoondeeyo rukhsadaha fulinta guddiga garaafka ee XAMPP. Waa inay u egtahay sidan:
Si aad u isticmaasho mysql, haddii aad sameysay qaabeyntii hore uma baahnid inaad tagto galka / opt / lampp / bin / mysql -u xididka -p inaad gasho hada waxaad kaliya ubaahantahay inaad furto terminal oo aad maamusho mysql -u root -p.
Hadda waxaan si garaaf ahaan ah u maamuli karnaa XAMPP-ga oo aan u heli karnaa mysql si caadi ah annaga oo aan aadin liiska / opt / lampp / bin
Kani waa hagaha oo dhan, waxaan rajeynayaa inaad ka heshay oo ha iloobin inaad ka tagto faallooyinkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida loo rakibo loona qaabeeyo XAMPP GNU / Linux
Kuwani waa qodobbada ugu qadarinta badan, ee ah faahfaahinta iyo saxda ah waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Wuxuu caawiyay asxaabti doorbidaysa Windows rakibida noocyada barnaamijka XAMPP. Ma aanan ogeyn jiritaanka rakibayaal Linux, oo loo isticmaali jiray rakibidda iyo qaabeynta LAMP, gacanta. Waxaan ku qanacsanahay inay caawinaad weyn u noqon doonto kuwa doonaya inay yeeshaan server leh astaamahan, waxaanan ku qancin doonaa barnaamijyo badan iyo maamuleyaal doorbida inay ku rakibaan Windows, si ay ugu qabtaan server-ka Linux. Waad ku mahadsan tahay Nexcoyotl maqaal aad u fiican!
Aad baad u mahadsan tahay, Federico, fikirkaaga waa la qadarinayaa, waxaan rajeynayaa in buugan yar ee fudud uu ahaa mid waxtar leh. Tani waa tii ugu horreysay ee aan rajeynayo in aan wax badan oo kale qaban doono.
Ku jawaab Nexcoyotl
Hanuun aad ufiican
Laakiin waxaan qabaa su’aal, maxaad u taabataa? Waan fahamsanahay inay tahay in la abuuro feyl madhan, laakiin nano oo kaliya, waad abuuri kartaa oo aad tafatiri kartaa feylka ...
Ku jawaab Yerko
taabto waa amar loo isticmaalo in lagu cusbooneysiiyo marin u helka iyo wax ka beddelka talooyinka hal ama in ka badan oo faylasha illaa hadda ah.
taabo [OPTINO]… FILE…
Haddii doodda FILE ama magaca faylka uusan jirin, markaa feyl faaruq ah oo isla magaca FILE ah ayaa la abuuray.
Waa si toos ah - oo aad u caan ah - habkan si loo abuuro faylal madhan, marka loo eego tifaftiraha nano
Orod nin taabasho Wixii macluumaad dheeraad ah.
Waad salaaman tahay yerko kahor waad ku mahadsantahay faallooyinka, sababta aan u adeegsado taabashada waa sababta oo ah aniga ahaan waa caado hehe. Iyo haddii, sida uu yiri saaxiib Federico, shaqadeedu waxay ka baxsan tahay abuurista faylasha. Hadaad rabto inaad waxbadan ogaato, bilow $ nin taabasho, salaan saaxiib.
Laakiin, taabashada ka dib waxaad wax ka beddeleysaa feylka, markaa waa tallaabo dheeraad ah waxa aad qabato.
Waan ogahay waxa taabashadu sameyso, waxaan kaliya doonayay inaan ogaado sababta aad u sameysay: P, maadaama oo nano ay ka badneyd wax ku filan 😉
Dukumiinti aad u wanaagsan, shaqo fiican.
Maxaad u isticmaashaa inaad ku hagaajiso jawaabta, runtii waan ka helay qaabkeeda.
Waad salaaman tahay saaxiib, waad ku mahadsan tahay joojinta iyo faallaynta 😀, Waxaan u adeegsadaa qolof koronto waa mashruuc il furan oo aad ka heli karto github. Way fududahay in la rakibo waxaan isticmaalaa bash iyo qolof koronto, in kasta oo aad sidoo kale u habeyn kartid zsh.
Cashar aad ufiican. Isku xirnaanta qaybta terminal-ka ayaa soo jiidaneysa dareenkeyga, ma wadaagi kartaa isku xirnaanta?
Waad salaaman tahay Koratsuki, hubi casharradan aan sameeyo, waxaan rajeynayaa inay waxtar kuu yeelan doonto inaad hagaajiso jawaabta. https://blog.desdelinux.net/configurar-bash-prompt-powerline-shell-master/
Aad ufiican wax ku biirintaada Walaal, waa wax laga xumaado inaan si dhib leh u arko daabicadan, dhowr todobaad ka hor waxay iiga tageen hawsha ah inaan ku xirayo jawi LAMP ah kombiyuutarkayga, laakiin wixii aan u arko way ka fududahay rakibida XAMPP. Sikastaba waad ku mahadsantahay waxtarkaaga, salaan.
Weyn, si aad u wanaagsan ayaa loo sharaxay iyo qaab fudud.
Ku jawaab daz08
Wax walba si fiican ayey u shaqeeyeen.
Waad salaaman tihiin, wax walboo lagu sharaxo sawirada, sidoo kale qoraal ma loogu sharaxay? Taasi waa, sawirada waxaa loogu talagalay ujeedooyin sawir leh oo keliya? Ama waxaa jira talaabooyin ay tahay inaad sameyso oo sawiro ku jira. Waxaan ku weydiinayaa maxaa yeelay waan indhoolanahay, oo aad ugama xeel-dheeraan Linux wali, marka ma doonayo inaan khalkhal sameeyo. Dhinaca kale, waxaan hayaa ubuntu saaxiibkiis 18. Casharradan ma lagu dabaqi karaa? Laga soo bilaabo mar hore aad ayaad u mahadsan tahay. Farxad!
Qalab aad u fiican oo leh nuxurka muuqaalka, tani waxay fududeyneysaa hagida dadka kale
Jawaab Leon S
- hal dhinac ayaa la muujiyaa laba jeer
- mid wadada
- iyo mid kale oo wadada maraya:
- Waxaan u maleynayaa dhab ahaantii waddadan labaad inay ahaato xampp-control-panel.desktop.
- Dhanka kale, si aan u sameeyo tallaabooyinka badankood, ma aanan haysan rukhsad, markaa waxaan ku dhammaaday inaan ka sii hormaro amarrada «sudo», si aan haddaba u abuuro.
- Laakiin dhamaadka marka aan galo astaanta waxay i siinaysaa fariin qalad ah:
Amarka "xampp-control-panel" lama fulin karin.
Ku guuldareystay socodsiinta howsha cunugga "xampp-control-panel" (Ogolaanshaha waa la diiday)
- Horey ayaan uga shaqeeyey oo waxaan ogolaanshaha fulinta ku dhejiyey feylka / usr / bin / xampp-control-panel.
Waad ku mahadsan tahay tani waxay ahayd wixii aan ku maqnaa rukhsadda oo la ii diiday.
Jawaab Harold Barboza
2020 qoraalkaani wali wuu shaqeeyaa!
Mahadsanid, way ii shaqeysay, in kastoo aanan arkin astaanta xampp laakiin sanduuq cad laakiin dhib malahan, kaliya waxaan dhibaato ku qabaa markaan isticmaalo tifaftiraha koodhka sida kan sare waxay ii diideysaa rukhsadaha si aan ugu sameeyo faylal mashaariicda htdocs. Waxaan ku guuleystey inaan sameeyo heer sare anigoo siinaya rukhsad waan aqrin karaa oo aan tafatiri karaa feylasha laakiin kama dhigi karo inaan abuuro faylal cusub.
Hal Milyan ayaa ugu mahadcelinaya Nexcoyotl maqaalka !!!, iyo dhamaan kuwa sameeya blog.desdelinux.net meel aad ka heli karto macluumaadka aan u baahanahay !!.
Mahadsanid mahadsanid !!
Ku jawaab juconta
Waxaan isticmaalaa liinta lint waxaanan isticmaali karaa mid lagu sharraxay marinka maaddaama aan sameeyo tallaabooyinka mana muuqdaan qayb garaaf ah